Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. तिहारपछि औषधि बोकेका ड्रोन गाउँ–गाउँमा पुग्छन् : महावीर पुन – Janata Live
पहाडि क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न विभिन्न कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले भौगोलिक रुपमा विकट रहेका त्यस्ता स्थानहरुमा औषधि पु-याउन हामीले ड्रोनको परिकल्पना गरेका हौँ ।
एसियाको नोबेल पुरस्कारको रुपमा हेरिने म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याएका छन् । उनीसँग मिलेर सयौँ इन्जिनियर नेपाली परिवेश सुहाउँदो आविष्कारमा केन्द्रित छन् ।
काठमाडौं, चितवन, धरान, जनकपुर र पोखरामा अनुसन्धानको काम भइरहेका छन् । आविष्कार केन्द्रले अहिले कृषि, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, बायोमेडिकल, पर्यटनलगायतका १६ क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा परीक्षण गरिरहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम मेडिकल ड्रोनको आविष्कार अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मेडिकल ड्रोनले नेपालका भौगोलिक हिसाबले विकट स्थानमा रहेका हेल्प पोस्टहरुमा स्वचालित मानवरहित प्रविधिको माध्यमबाट औषधि पु-याउने काम गर्नेछ । नेपालमा मेडिकल ड्रोनको आविष्कारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ध्यानसमेत खिच्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर इन्जिनियर्स नेपालले आविष्कार केन्द्रमा अध्यक्ष पुनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरु यतिबेला ‘मेडिकल ड्रोन’को आविष्कारमा लाग्नुभएको छ । काम कहाँसम्म पु-याउनुभयो ?
हामीले यसमा काम गरेको दुई वर्षजति भयो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चे भन्ने ठाउँमा २०७४ सालमा एक किलो औषधि बोकाएर ड्रोन पठाएका थियौँ । त्यो हाम्रो परीक्षण थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न ठाउँमा उडान ग-यौँ । त्यस क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउने काम भइरहेको छ । यो प्राविधिक रुपमा निकै जटिल काम हो । अहिले हाम्रा इन्जिनियर भाइबहिनीहरुले ८० प्रतिशत जति काम गरिसक्नुभएको छ । यस हिसाबले काम निकै अघि बढिसकेको छ । हामी सफल भइसकेका छौँ ।
आविष्कार केन्द्रले ड्रोन बनाउन शून्यबाटै काम सुरु गरेको हो । ल्याबमा लामो समयको मेकानिकल, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स कामपछि बल्ल ड्रोन बनेको हो । त्यसपछि परीक्षण ग-यौँ । परीक्षण गरेपछि देखिएका समस्या समाधानको काम यतिबेला भइरहेको छ । कीर्तिपुरमा पटक–पटक परीक्षण उडान भइरहेका छन् । त्यसपछि देखिने समस्याको प्राविधिक रुपमा हल गरिरहेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा आठवटा पंखा र दुईवटा पखेटा भएको जहाजजस्तै उड्ने मेडिकल ड्रोन आविष्कार केन्द्रको रिसर्च ल्याबमा उड्नका लागि केही समयमै तयार हुनेछ ।
सबै पार्टपुर्जा विदेशबाट ल्याएर तिमीहरुले के आविष्कार ग-यौ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछन् कोही–कोही । आविष्कार भनेको कुनै पनि चीजलाई आफ्नो वा बजारको आवश्यकताअनुसार ढाल्नु हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त स्वदेशकै युवापिँढी ड्रोन बनाउन लागिपरेको छ ।
ड्रोनले कुन–कुन ठाउँमा औषधि पु-याउँछ ? तपाईंहरुको लक्ष्य के हो ?
पहाडि क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न विभिन्न कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले भौगोलिक रुपमा विकट रहेका त्यस्ता स्थानहरुमा औषधि पु-याउन हामीले ड्रोनको परिकल्पना गरेका हौँ । पहाडी भेगमा उडान भर्न सक्ने गरी ड्रोनको तीन हजार मिटर उचाइसम्मका बस्तीमा सफल परीक्षण भइसकेको छ ।
सबै पार्टपुर्जा विदेशबाट ल्याएर तिमीहरुले के आविष्कार ग-यौ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछन् कोही–कोही । आविष्कार भनेको कुनै पनि चीजलाई आफ्नो वा बजारको आवश्यकताअनुसार ढाल्नु हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त स्वदेशकै युवापिँढी ड्रोन बनाउन लागिपरेको छ । यो उनीहरुका लागि सिप सिक्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठूलो अवसर हो । अरु कुरा विस्तारै सिक्दै लागू गर्दै लैजाने हो । एकैपटक सबै खोजेर हुँदैन । समय लाग्छ ।
सबै पक्ष सकारात्मक छन् भने युवाहरु आफ्नो आइडियाका साथ आविष्कार केन्द्रसँग जोडिन सक्छन् । तर, सुरुमा जोसका साथ आउने अनि पछि काम गर्न नसक्नेहरु पनि धेरै देखिएका छन् । आफ्नो आइडिया सफल बनाउन चाहने जो कोही आविष्कार केन्द्रमा उचित प्रपोजल लिएर आउँछ भने हामी उसलाई स्वागत गर्न सधैं तयार छौँ । -इन्जिनियर्स नेपालबाट
उपत्यकाको निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने
काठमाडौं – बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा आदेशमा उल्लंघनका घटना बढेपछि अधिकारीहरुले कडाई गरिने बताएका छन्। निषेधाज्ञाको...
२४ घण्टामा थप ५,७६३ जनामा कोरोना संक्रमण, १९ जनाको मृत्यु
काठमाडौं – नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर पाँच हजार ७६३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा...